ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်တတ်သူ တစ်ယောက်ကို ပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ကွက် (၈)ခု - Lifestyle Myanmar
ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်တတ်သူ တစ်ယောက်ကို ပြန်ဆန့်ကျင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လှည့်ကွက် (၈)ခု
” မင်း မိနစ် ၄၀နောက်ကျလို့ ငါဒေါသထွက်မိတာ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ ဒါက ငါ့အမှားပါကွာ။ ငါမင်းကိုသတိပေးဖို့ မေ့နေခဲ့တာ။ အိတ်တွေက ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လေးတာလည်း မဟုတ်ဘူး”။ ဒီအသံက သင်နဲ့ အကျွမ်းတဝင် ရှိနေသလား၊ ကျွန်တော်တို့ မမျှော်လင့်ထားပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီဟာက ခြိမ်းခြောက်မှု၊ အပြစ်ရှိမှု၊ မြှောက်ပင့်မှုနှင့် အကျပ်ကိုင်မှုကဲ့သို့သော ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်မှု ဖြစ်လို့ပါပဲ။
သင့်ကို သူတို့ဘက်မှာ ရပ်တည်အောင် ကြိုးစားသူ၊ သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မေးခွန်းထုတ်တတ်သူတွေက သင့်ကိုလှည့်စားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
၁။ ရည်ရွယ်ချက်ကို ဖယ်ရှားပစ်ပါ
အသုံးချတတ်သူတွေဟာ အခြားသူတွေကို အသုံးပြုဖို့ တိကျသော အခြေအနေများကို အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်၊ သူတို့ဟာ သင်ကို အလုပ်တစ်ခုရှာပေးတာ (သို့) သင့်အား လက်ဆောင်လေးတစ်ခုပေးတာ ကဲ့သို့သော သင့်အတွက် ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကို လုပ်တတ်ပါတယ်။ ပြီးရင် သင်မလုပ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခုခုကို တောင်းခံတဲ့အခါ သင်ငြင်းဆန်လို့ မရတော့ပါဘူး။
အသုံးချတတ်သူတစ်ယောက်ကို motive မပေးပါနဲ့။ လက်ဆောင်ကို ပြန်ပို့ပြီး သင့်အလုပ်ပြဿနာတွေကို သင်ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းပါ။ သင် ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ အကြွေးမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကို ပျော်မွေ့ပါ။
၂။ ခြယ်လှယ်သူအပေါ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုထားပါ
ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်သူတစ်ယောက် အနည်းဆုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာက သူတို့ရဲ့သားကောင်ထံမှ မြန်မြန် လက်စားချေမှုဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမေးခွန်းတွေမေးပါ။ ဥပမာ-
” ငါ့အမြင်ကို မင်းတကယ် ဂရုစိုက်တာလား? ငါ့ကို တောင်းဆိုဖို့ မင်းမေးမြန်းနေသလိုသာ ငါခံစားရတယ်”
” မင်းနဲ့အမြင်မတူရင်တောင် ငါ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မင်းတကယ်ထောက်ခံမှာလား?”
” ငါ့ကိုဒီလိုလုပ်ဖို့ မင်းတကယ်မျှော်လင့်ထားသလား? အဲ့ဒါ ငါ့ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကောင်းဖို့အတွက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ မင်းသိပါတယ်”
သင့်မှာ သူတို့အလုပ်တွေကို တခြားသူတွေအား လွှဲပြောင်းပေးရတာ နှစ်သက်တဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက် ရှိပါသလား? နောက်တစ်ခါကျရင် သင့်အလုပ်ကို သူတို့လုပ်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်မလားဆိုတာ မေးကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီမေးခွန်းတွေက သူတို့တောင်းဆိုနေတာတွေက ဘယ်လောက်စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းကြောင်း ပြသပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် သူတို့က ပြန်ချေပကောင်း ချေပပါလိမ့်မယ်။
၃။ သူတို့နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကို သုံးပါ
ဒါက အခြားလူတွေအတွက်သာမဟုတ်ဘဲ သင့်အတွက်လည်း အသုံးဝင်ပါတယ်။ ဒါက အိုင်ဒီယာအသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ How to Win Friends and Influence People ဆိုတဲ့ ၁၉၃၆ခုနှစ်က စာအုပ်မှာ လူတွေရဲ့ နာမည်တွေကို အသုံးပြုဖို့ ဘယ်လိုအရေးကြီးကြောင်း Dale Carnegie ကပြောထားပါတယ်။
ဒီစကားပြောဆိုမှုက နားလည်မှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်။ သတိရပါ။ လူအများစု နှစ်သက်တဲ့ နာမည်ပုံစံကို သုံးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေကို အခေါ်ခံရသူတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် ပိုပြီး ခင်မင်ရင်းနှီးကြပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို ခြယ်လှယ်သူများနှင့် အသုံးပြုပါ။။ ဖြစ်နိုင်တာက သူတို့ဟာ သင့်ကို နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံပြီး အသုံးချဖို့ မကြိုးစားတော့ပါဘူး။
၄။ သူတို့မျက်လုံးထဲကို စိုက်ကြည့်ပါ
အရင်အခြေအနေတွေလိုပဲ ဒီလှည့်ကွက်ရဲ့ အဓိကအချက်က အသုံးချသူကို အာရုံစူးစိုက်မှု ပျောက်ဆုံးစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမခြေလှမ်းမှာ သင်မလုပ်ချင်သော တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းဆန်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ မျက်လုံးကို စိုက်ကြည့်ပြီး ဘာမှမပြောပါနဲ့။
သင့်ကိုအသုံးချမယ့်သူဟာ သူကိုယ်တိုင် သင့်အား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြည့်ဖြင့် ပြန်စိုက်ကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ မျက်လုံးချင်းဆုံသွားရင် သူတို့ရှိးတိုးရှန်းတန်း ဖြစ်သွားပြီး သင့်ကို နောက်တစ်ခါ မတောင်းဆိုရဲအောင် မသက်မသာ ခံစားရပါလိမ့်မယ်။
၅။ သူတို့ကို ယေဘုယျ ကောက်ချက်ချခွင့် မပြုပါနဲ့
အသုံးချတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ရဲ့ standard နည်းဗျူဟာက စကားစပ်ထဲက တိကျတဲ့အခြေအနေကို ယူပြီး သင့်ကိုရှက်စရာဖြစ်အောင် သင့်ရဲ့ ပုံမှန်အပြုအမှုကို ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ- ဇနီးတစ်ယောက်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အမှိုက်ထုတ်ယူသွားဖို့ မေ့နေတာကို ဒေါသထွက်ပါတယ်။ ဒါက ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သော်လည်း ပုံမှန်အိမ်မှုကိစ္စကို ရှောင်ကြဉ်တဲ့အတွက် သူ့ကိုပြောပါတယ်။ လူတွေ ဒီလိုယေဘုယျကောက်ချက်ချတာကို ခွင့်မပြုပါနဲ့။
၆။ သူတို့ တကယ်နားလည်တဲ့အထိ တစ်ခုခုကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပါ
Broken မှတ်တမ်းတွေက စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်သူတွေဟာ အထူးသဖြင့် သူတို့ ကြားချင်တဲ့အရာမဟုတ်ရင် တူညီတဲ့ စကားစုကို ထပ်ခါထပ်ခါ မကြားချင်ကြပါဘူး။ လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖိအားပေးနေတာ ရပ်တန့်သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ခံစားရတယ်ဆိုရင်၊ သူတို့ကို အကျိုးဖြစ်စေမယ့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ သင့်ကို တွန်းအားပေးရန် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုရင် (universal response) တစ်လောကလုံးရဲ့ တုံ့ပြန်မှု တစ်ခုပြုလုပ်ပါ။ တစ်လေသံတည်း ထပ်ပြောပါ။ သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှုအသံ မပါပါစေနဲ့။
လူတကာရဲ့ အဖြေတွေက “ငါလုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး”, ” ဒီစကားမျိုးပြောတာ ငါမကြိုက်ဘူး” (သို့) ဆွေးနွေးတာကို ရပ်တန်ကြစို့” ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံးအရာက သင့်လေသံကို မပြောင်းဖို့နှင့် ဘာအီမိုးရှင်းမှ မပြဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာကို သင်ဂရုမစိုက်ပါက ဒီလိုအသံတွေထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ-
မင်း ငါ့ကိုနားလည်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ
ငါ နောက်ထပ် မင်းကို နားထောင်ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ
အရိုးရှင်းဆုံးအရာတွေကို မင်းနားမလည်ဘူး၊ မင်း ငါ့ကို နားမလည်ချင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
၇။ သင့်ကိုယ်သင် စိတ်အာရုံပြောင်းပါ၊ အနားယူပါ
ဒီအခြေအနေကို ဟာသဖြင့် လွယ်ကူစွာ ဖြေရှင်းဖို့ ကူညီနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်လှည့်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်နှင့် အသုံးချတတ်သူတို့အကြား ထူထဲသော နံရံတွေနဲ့ ဧရာမငါးအလှမွေးကန်တစ်ခု ရှိတယ်လို့ မြင်ယောင်ပါ။ အသံက ဒီနံရံတွေမှတဆင့် မသွားနိုင်ပါ။ ဒီလူရဲ့ နှုတ်ခမ်းတွေ လှုပ်နေတာကို သင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော ယခုအချိန်မှာ သူတို့ဘာပြောနေတာကို သင်မသိပါ။
၈။ သင့်ရဲ့ အကွာအဝေးကို စောင့်ရှောက်ပါ
အသုံးချတတ်သူဟာ အခြားသူတွေရဲ့ private space ကိုဝင်ရောက်ရတာ နှစ်သက်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မင်းဆီကို အနီးကပ်လာပြီး မင်းရဲ့ လက်ကို ထိလိုက်မယ်။ သူတို့က သင့်ကို နောက်ကျောကို ဖွဖွပုတ်လိုက်ပါမယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ရပ်တန့်ဖို့အတွက် ခြေလှမ်းတွေကို အနည်းငယ် ပြန်ဆုတ်ပါ။ ဒါက သင်လိုအပ်တဲ့ အကွာအဝေးကို ရရှိဖို့နှင့် ထိတွေ့မှုကို ရပ်တန့်ဖို့ ကူညီပါလိမ့်မယ်။
ဒါက ကျွန်တော်တို့အများစုအတွက် တစ်စုံတစ်ယောက်က သူတို့အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့အခါ ပြောဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီကိစ္စမှာ သင်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို စာပို့ခြင်းကနေတဆင့် ဆွေးနွေးဖို့ တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။